Waxbarashadu Ma Jawaabbaa? | Martech Zone
Waxbarashadu Ma Jawaabbaa?
Sabtida, Maarso 8, 2008 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Douglas Karr
Waxaan weydiiyay su'aal on Weydii 500 oo Qof taas oo heshay jawaab xiiso leh. Su’aashaydu waxay ahayd:
Kulliyaduhu ma yihiin uun hab abaabulan oo jaahil ka gudbinaya jiilba jiilka kale?
Marka hore, aan sharaxaad ka bixiyo inaan ereyga u qoray su'aasha si run ahaantii ay u dhaliso jawaab - waxaa loo yaqaan isku xidhka wayna shaqeysay. Jawaabaha degdega ah ee aan helay qaarkood waxay ahaayeen edeb darro, laakiin guud ahaan codbixinta ayaa ah tan saamaynta ku yeelatay.
Ilaa hadda, 42% ee codbixiyayaashu waxay yiraahdeen haa!
In aan weydiiyay su'aasha macnaheedu maahan inay tahay aragtidayda - laakiin waa aniga walaac aniga. Illaa iyo hadda, waayo-aragnimada wiilkayga ee IUPUI ayaa la yaab leh. Isagu waa weyn ee Xisaabta iyo Fiisigiska kaas oo soo jiitay fiiro badan iyada oo loo marayo abuurista xiriiro iyo isku xirka shaqaalaha. Macallimiintiisu runtii way ku xujeeyeen oo ay sidaas ku sii wadaan. Waxay u soo bandhigeen ardayda kale ee ku fiican waxbarashadooda sidoo kale.
Telefishinka iyo doodaha internetka, waxaan sii wadayaa inaan maqlo qofka waxbarashadiisa oo tilmaamaya sida ka go'aaminta cunsur ku saabsan awoodda iyo khibradda qof badan. Waxbarashadu caddeyn ma u tahay maamulka? Waxaan rumeysanahay in waxbarashada dugsiga sare kadib ay siiso qofka saddex waxyaalood oo muhiim ah:
Awoodda lagu dhammaystiro a himilada muddada-dheer. Afarta sano ee kulleejadu waa waxqabad layaableh waxayna siisaa shaqo-bixiyeyaasha caddayn ah inaad guuleysan karto iyo sidoo kale inaad qalin-jabiyaha u siiso kalsooni kartidiisa / ayada.
Fursadda in qoto dheer aqoontaada iyo waayo-aragnimo, adoo xoogga saaraya mowduuc aad dooratay.
Caymiska. Shahaadada kulleejadu waxay bixisaa caymis badan si loo helo shaqo mudan oo leh mushahar wanaagsan.
Welwelka aan ka qabo waxbarashada ayaa ah in qaar badani aaminsan yihiin in waxbarashadu qofka ka dhigto mid 'caqli badan' ama iyaga siisa awood ka badan kuwa kuwa aqoonta yar. Waxaa jira tusaalooyin aan la soo koobi karin oo taariikhda ku saabsan halka hogaamiyaasha fikirka ay ku jees jeeseen kuwa aqoonta leh… ilaa ay si kale u muujiyeen. Kadibna waxaa loola dhaqmaa inay yihiin kuwa ka reeban, maahan sharciga. Hal jawaab oo ku saabsan su'aasha ayaa si dhammaystiran u qeexday:
… Waxay umuuqataa cadaadis, oo lid ku ah muujinta, waxay ku dhowdahay 'dhaqan gal' xaalado badan. Soo-gaadhista kala-duwanaanta, dhammaan heerarka, waa 'madadaalo' qayb ka mid ah waxbarashada kuleejka. Aniga ahaan, soo-gaadhistaan ​​ayaa ah waxa khibradda waxbarasho ay tahay inay ahaato. Waxaan dareemayaa PC leeyihiin ama si daran u xaddidayaan fikirka xorta ah.
Bilyaneerrada iyo Waxbarashada
Mark Zuckerberg waa qofka ugu da'da yar ee soo galay liiska bilyaneerada Forbes. Waa tan qoraal xiiso leh oo ku saabsan Zuckerberg:
Zuckerberg wuxuu kaqeyb galay jaamacada Harvard wuxuuna kaqeyb galay fasalka 2006. Wuxuu kamid ahaa xubnaha Alpha Epsilon Pi. Harvard, Zuckerberg wuxuu sii waday abuurista mashaariicdiisa. Wuxuu la degay Arie Hasit. Mashruuc hore, Coursematch, ayaa ardayda u oggolaaday inay eegaan liisaska ardayda kale ee isku fasallada dhigta. Mashruuc dambe, Facemash.com, wuxuu ahaa goob qiimeyn muuqaal gaar ah leh oo Harvard la mid ah Hot ama Maya.
Nooc ka mid ah boggan ayaa khadka taleefanka ku jiray muddo afar saacadood ah ka hor inta uusan Zuckerberg marintiisa internetka kala noqon mas'uuliyiinta maamulka. Waaxda adeegga kumbuyuutarka ayaa horgeysay Zuckerberg Guddiga Maamulka Jaamacadda ee Harvard, halkaas oo lagu soo oogay dacwad ah inuu jebiyey amniga kombuyuutarka iyo ku xadgudubka xeerarka u gaarka ah Internetka iyo hantida aqooneed.
Waa kan arday ka socda mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan dalka oo muujiyey karti-xirfadeed ganacsi oo baaxad leh. Jawaabta jaamacada? Waxay isku dayeen inay xidhaan! Waad ku mahadsan tahay Mark inuu sii waday dadaalkiisa mana u oggolaanin aasaasku inuu joojiyo.
Ma Barnaa “Sidee” vs “Maxaa” looga fikiro?
Deepak Chopra ayaa weydiisay su'aal ku saabsan Seesmic dareen. Ma siinayo su’aashiisa cadaalad, Deepak Chopra ayaa safka hore kaga jira (ra’yigayga hooseeya) ee falsafadayaasha maanta iyo fiqiga. Wuxuu leeyahay aragti u gaar ah nolosha, caalamka, iyo isku xirnaanshaheena.
Mid ka mid ah jawaabtii loo diray Deepak waxay ahayd in waxbarashadii qofku ay siisay awood uu si sax ah ugu turjumo waxyaabaha ku jira deegaankiisa si ay u siiso 'dareen'. Ma caqligaasi baa? Mise waa eex ama eex? Haddii jiilba jiilba jiilba jiil wax loogu baro isla 'caddeyn' iyo isla qaab isku mid ah oo lagu tarjumo doorsoomayaasha - ma waxaan wax u baranaa dadka sida loo ka fikir Mise dadka ayaynu barnaa maxaa la gudboon ka fikir?
Waan ku faraxsanahay fursadayda ah inaan kaqeyb galo kuleejka riyadayduna waxay tahay in carruurtaydu ay sidoo kale qalin jabiyaan kulliyadda. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka baryayaa inay sii baranayaan markay waxbaranayaan, in carruurtayda waxbarashadoodu aysan u horseedin falalka hubris. Waxbarasho qaali ah macnaheedu maahan inaad caqli badan tahay, macnaheedu maahan inaad taajir noqon doontid. Khayaaliga, caqliga, iyo adkeysigu waxay muhiim u yihiin sida waxbarashada weyn.
William Buckley, oo dhowaan dhintey, ayaa mar yiri, “Waxaan jeclaan lahaa in la i xukumo magacyada 2000 ee ugu horeeya buugga taleefanka Boston halkii aan ka ahaan lahaa deeqda Harvard."
Tags: shahaadooyinkaEducationcalaamadee zuckerbergshahaadada suuqaGOORMUUjaamacadwilliam buckley
Duubista Dharka Laalaab La'aanta
Liistada Hubinta Blogging-ka…
Mar 9, 2008 at 1: 57 AM
Doug - DIIWAANKA dibedda !!
Ma ahi taageere nidaamkayaga waxbarasho ee hadda jira. Waxaan ku raacsanahay gabi ahaanba fikradda ah inay tahay uun jiil jiil jaahilnimo u gudbinaya jiilka xiga.
Waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan barno kuweena inaad FIKIRO. Marar badan waxaa naloo baray si fudud xusuus iyo akhrin.
Mar 9, 2008 at 7: 40 AM
Haa, laakiin Buckley wuxuu aaday Yale.
Mar 10, 2008 at 10: 03 AM
Ha! Qodob weyn, Clark!
Mar 9, 2008 at 9: 10 AM
In kasta oo aanan ka warqabin sida Mareykanku u abaabulo una siiyo nidaam waxbarasho, haddana waxaan xoogaa fahamsanahay nidaamka Boqortooyada Ingiriiska. Way nuugtaa ..
Uma socon doonno hadal siyaasadeed, laakiin dowladdeenna hadda jirta (http://www.labour.org.uk/education) waxay rabaan 50% ee 18 jirka inay gaaraan shahaado jaamacadeed (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation)… Dhibaatada tan? Waxay hoos u dhigeysaa qiimaha darajada.
Maaddaama shahaadada noocaas ahi ay noqonayso mid aan qiimo lahayn, oo ay ka sii muhiimsan tahay in la helo natiijo lagu kalsoonaan karo, si aad u baran karto PhD ama masters.
Ujeeddada shahaado waa in la siiyo awoodda xog looga qaato meelo badan, taasna loo beddelo faham. Maaha waxa aad barato, laakiin sida aad u sameyso.
Mar 10, 2008 at 10: 05 AM
Taasi waa qodob aad u fiican. Haddii qof kasta oo waddanka ka mid ahi uu helay shahaadadiisa - markaa shahaadadu waxay noqoneysaa midda ugu yar ee mar kale la heli karo. Waxaa laga yaabaa in shaqooyinka aan u baahnayn shahaado ay u baahan doonaan mid marka qof kastaa haysto.
Mar 9, 2008 at 10: 25 AM
Haddii aad eegto sababahaaga gaarka ah ee tacliinta sare muhiim u tahay, waxaad arki doontaa in midkoodna uusan ku jirin barashada sida loo fikiro.
Midka kuugu dhow waa # 2, kaas oo ku siinaya alaabta ceyriinka ah ee aad ku fekereyso. Jawaabta su'aasha Deepak Chopra ee aad sheegtey waxay ahayd waxaan u maleynayaa in laga hadlayo qodobkaan. Dareenku wuxuu ubaahan yahay alaab ceeriin ah oo lagu shaqeeyo. Inta badan ee aad ogtahay, ayay u badan tahay inay dhici karto.
Kuleejku ma yahay waddo looga gudbi karo jiilalka jahliga hadda jira? Si xun loo eegay, haa. Si togan loo eegay, waa hab looga gudbayo heerka aqoonta hadda taagan. Haddii aad nasiib leedahay, waxaad helaysaa macallimiin iyo lataliyeyaal kugu dhiirrigeliya inaad ka gudubto heerkaas aqoonta ee hadda jira.
Dadka intiisa badan, in kastoo, kuleejku waa iskuul xirfadeed sharaf leh, hab lagu sameeyo iskuxiryo horay u marinaya shaqadooda, iyo kalabar guri u dhexeeya carruurnimada ilaa qaan-gaarnimada.
Mar 10, 2008 at 10: 11 AM
Sababta uma aanan dhigin maxaa yeelay runtii uma maleynayo inay tahay waxa lagu gaarey waxbarashada casriga ah ee dugsiga sare kadib. Run ahaantii daacadnimo kama lihi markaan shaqaalaysiinayo qof ka qalin jabiyay kuleej ka badan inta aan shaqaalaysiiyo arday ka qalin jabisay dugsiga sare inay leeyihiin xirfado hal abuur leh oo loo baahan yahay si loogu guuleysto goobta shaqada maanta.
Waxaan horay u iri waxaan rabaa in labadeyda caruurba ay helaan bachelor-kooda (uguyaraan); si kastaba ha noqotee, ma aaminsani in helitaanka diblooma ay u xaqiijinayso iyaga guusha. Kaliya waxaan aaminsanahay inay ka caymineyso fashilka.
Mar 10, 2008 at 2: 20 PM
Waxaad tiri ereyga sixirka: hal-abuurnimo
Adeegsiga mala-awaalka / hal-abuurka si habboon waa habka loo maro barashada iyo ikhtiraaca taasina ma qaadanayso waxbarashada dugsiga sare. Laakiin waxaan u maleynayaa in inteeda badan, waa inaan baranno inaan iska indhatirno shucuurta taban ee xireysa wadada fikirka saxda ah ee xannibaya wadada ficilka habboon / togan.
Mar 11, 2008 at 12: 59 AM
Waxaan rumaysanahay in waxa ugu qiimaha badan ee qofku ka bixi karo kuleejka ay tahay wax aan lagu darin. Waxaan u maleynayaa in sababta ugu wanaagsan ee loo aado kuleejka ay tahay in lala tartamo oo lala kaashado asaaggooda, Hadana sida ugu wanaagsan ee iskuulku uga sii fiicnaado asxaabta midba midka kale ugu dadaalayo heerka asaagooda ah. Gaar ahaan marka asxaabtaas ay ka imaan karaan khibrado kala duwan iyo / ama dhaqamo kala duwan oo aniga iga duwan.
Waxaan aad uga helay barashada ardayda kale iyo inaan ku lug yeesho nashaadaadyada khaaska ah iyaga marka loo eego dhinacyada kale ee kulliyadda.
Nasiib darrose waxaa jira qayb ballaaran oo ka mid ah dadkeenna (~ 42%?) Kuwaas oo ka baqaya kulliyadaha, gaar ahaan kulliyadaha wanaagsan, maxaa yeelay waxay ku qasbaan ardayda inay su'aalo ka qabaan cuqdaddooda iyo fikradaha ay qabaan. Dad aad u tiro badan ayaa doorbidaya inay kaliya aaminaan waxa ay rabaan inay aaminaan sidaasna ay ku hareereeyaan kuwa kale oo awood u siiya dhaqankooda maskaxeed madaama ay xaddidayaan aragtidooda adduunka. Ka dib oo dhan, habka ugu wanaagsan ee lagu rumaysan karo waxa qofku doonayo inuu rumeeyo ayaa ah in la hubiyo inaysan jirin wax caddayn ah oo liddi ku ah.
Haddii aan horay ugu soconno dal ahaan, adduun ahaan, jinsi ahaan, dadku waa inay ka gudbaan baahidan jir ahaaneed ee ay u cabbudhiyaan wax kasta oo ka hor imanaya aragtidooda adag ee adduunka. Nasiib darrose, anigoo ku saleynaya wixii aan arkay inay dhacayaan tobankii sano ee la soo dhaafay, kama qabo rajo badan oo ah in dadka badankood ay dhab ahaan dhinac u ridayaan fikradahooda la daweynayo si ay taasi dhab u dhacdo.
Mar 11, 2008 at 8: 48 AM
Mike - taasi waa qodob aad u fiican. Waxaan ka imid qoys kala geddisan oo waxaan ku wada nool nahay waddanka oo dhan - laakiin in badan, waa markii ugu horreysay ee dhallinyarada qaan-gaarka ah lala xiriiro dhaqammo kale oo ka baxsan xaafaddooda.
Si daacadnimo ah kama qabo rajo badan sidoo kale. Waxaan u maleynayaa in dadku ay ku codeynayaan 'dabaysha' oo aysan mar dambe wax fikir ah gelin. 2da xisbi si fiican ayey u barteen ku takri falka ereyada.
Mar 11, 2008 at 5: 27 PM
Uma maleynayo inay xisbiyadu u badan yihiin dadka. Gaar ahaan dadka urursada koox koox iyo danaha gaarka ah sida 501 (c) iyo "taangiyada". Marnaba isma beddelayso ilaa dadku ka tooso oo ay ogaadaan in loogu ciyaarayo pawns.
Qeyb ka mid ah ujeedkeyga ayaa ahaa in dadku ay leeyihiin fikradaha noocaas ah ee xididdada u ah ee ay ka baryaan in lala dhaqmo. Maaha qaladaadka xisbiga ee ay ku fekeraan fikradaha dadka oo ay isaga horyimaadaan “kuwa kale” si ay awoodooda u helaan. Xisbiyadu hadda waxay barteen sida loo gaaro himilooyinkooda, si loo doorto.
"Liberal" iyo "muxaafid" waa qaar ka mid ah calaamadaha qaawan ee hadda jira halkaasoo kooxuhu ay dadka ku maareeyaan iyagoo ku wacdiyaya fikradaha iyo jinniyo gelinta qaar ka mid ah fikradaha sida fudud loo aqoonsan karo iyo in kiisas badan oo aan jirin. Dadkani waxay adeegsadaan cabsi iyo kala qaybin xagga diinta, midabka, jinsiga, dookha galmada, dhaqanka, juqraafiga, wadaniyadda.
Markii aan yaraa waxaan qabnay “Dagaalkii qaboobaa” laakiin intaas kadib waa iga baxay waxaan moodayay inaan helnay amar cusub oo adduunka ah oo ka shaqeyn kara ganacsiga kuna noolaan kara nabad. Ilaahey waa caqli xumaa waxaan ahaa.
Apr 6, 2008 at 1: 27 AM
Waxaan u maleynayay inaad jeclaan laheyd inaad aragto yaa kale oo ra'yi qaba…
"… Nasiibdaro dhaqameedyo qaran oo loo kala gudbiyo sida cudur dhaxal ah jiilba jiil iyadoo loo marayo nidaamka nidaamka waxbarashada."
Apr 8, 2008 at 12: 43 PM
Kaliya tan ayaa heshay, aad u qabow!
Jul 6, 2009 markay tahay 4:38 PM
Waxaa la helay maqaalkan cajiibka ah: Faa'iido darrooyinka waxbarashada Elite.